Saints | Good Shepherd Sisters Myanmar
Good Shepherd Sisters Myanmar
Our Spirit and Charism
History of GSMF
ST. MARY EUPHRASIA PELLETIER (1796-1868)
BLESSED MARIA DROSTE zu VISCHERING (1863-1899)
St. John was born at Ri, France on November 14th, 1601. He went to the Jesuit college at Caen when he was 14, and despite his parents’ wish that he marry, joined the Congregation of the Oratory of France in 1623. When he was ordainedapriest in 1625, at the age of 24, he was immediately thrust into the service of victims of the plague, whom he cared for at great risk to his own life. He also began preaching missions and was known as the greatest preacher of his age, preaching missions all over France, especially throughout Normandy.
He was also instrumental in encouraging devotion to the Sacred Heart of Jesus and the Holy Heart of Mary, writing the first book ever on the devotion to the Sacred Hearts, “Le Coeur Admirable de la Très Sainte Mère de Dieu”. He died at Caen, on August 19th, 1680.
His virtues were declared heroic by Leo XIII, on January 6th, 1903. The miracles proposed for his beatification were approved by Pius X, May 3, 1908. He was beatified April 25th, 1909 and was canonized in 1925.
Rose Virgine Pelletier was born on the Island of Noirmoutier on 31st July 1796. She is the eighth child of exiled prisoners of the French revolution, Dr. Julien Pelletier and Anne (née Mourain) who had been deported from Soullans to Noirmoutier as “suspects.” Since there was no priest on the Island, she was baptized by her father in their family living room on the day she was born and was named “Rose Virginie.” Rose wasalively child, full of fun; loved her Island and its woods and the ocean, full of spirit, with an ardent nature which readily took on mischievous appearances, but preserved deep down the Vendean faith and an unshakeable will. She reacted like any child: bathing her little feet in the milk; hanging the wig ofasleeping neighbor on his door post, and in adventure restoringashrine to the island patron, St. Philbert.
She was alwaysaleader, fearless and determined; her childhood friends eagerly followed her in pranks and pious projects. She knew pain and loneliness from her early age: at nine, she lost her sister Victoire-Emilie and following year, her father died unexpectedly at the age of fifty-four. Rose was taught at home until Ursuline Sisters came to the Island and openedaschool when she was twelve. Rose enjoyed school; her quick and brilliant mind impressed both teachers and friends. Because of her impetuous, impulsive nature, she often clashed with authority at school. Her teacher said that her character could lead her to becoming an angel oradevil. Her quick response was: “I know I will need to be broken in, but I will beareligious.”
At eleven, Rose received First Communion; on that day, she feltastrong desire to dedicate herself to Christ. Learned from her parents what it is to live the Gospel and nourished her spirit on the Scriptures. Asachild, she learned much of the Gospel by heart at her mother’s knee. On September 21, 1809 three young Ursuline Sisters made their Profession of vows at her Parish Church. Many years later, she speaks of how deeply this touched her.
For her, all human beings are “brothers and sisters” of the same heavenly Father; like her parents, compassion was the keynote of her life. Her sensitivity and good heart led her toasincere regret for her pranks and she would discipline herself at her evening prayers. Each night before going to bed, she used to ask pardon for the sins she committed during the day and offeredaprayer for the Pope and the Church
At fourteen, Rose was sent toaboarding school in Tours run by Mme. Chobelet,afriend of her mother. In Boarding School, she terribly missed her freedom of life on the Island, felt cut off from her family, and found life very hard. However, she received the warmth and encouragement of an understanding teacher, Pauline de Lignac. In 1813, her mother died and Ann was already buried when Rose Virginie became aware of her death. Rose suffered so much from the loss of her mother.
When she heard of the work of the Order of Our Lady of Charity of Refuge (founded by St. John Eudes in 1641) who took in women and girls who were homeless and at risk of exploitation, she felt the call deeply. Her guardian, Mr. Marsaud, consented to her desire only on one condition that Rose make no public vows before her twenty-first birthday. She entered the convent of the Refuge in 1814 and pronounced her first vows in 1817 and took the religious name “Mary Euphrasia.” After her first profession, Sr. Mary Euphrasia was appointed as the directress of the girls to whom she devoted herself unreservedly. On 25 May 1825, at twenty-nine years of age, Mary Euphrasia was elected as the superior of Tours. Her first move was to foundacontemplative community called “Magdalens”(known today as “Contemplative Sisters of the Good Shepherd”) devoted to prayer and penance to support the active mission of the apostolic community.
In 1829, accepting the request of the Bishop of Angers, Mary Euphrasia foundedahouse of the Our Lady of Charity in Angers for the young girls in distress. Having completed her term of office in Tours, Mary Euphrasia became the superior of the house in Angers in 1831. Soon, Mary Euphrasia received requests for new foundations from other cities in France, Europe and beyond. Arising out of her desires to meet the requests, she envisioneda“generalate”,anew governing structure and appealed to Rome for approval. In 1835, Mary Euphrasia received the approval from Pope Gregory XVI to establish the Generalate in Angers. Thus, on 16 January 1835anew congregation “Our Lady of the Charity of the Good Shepherd” was born. With Mother Euphrasia as the first Superior General of the Good Shepherd Sisters, it expanded quickly. Within her lifetime, she founded 110 new houses of the Good Shepherd, spreading to every corner of the world.
Mary Euphrasia died in Angers on April 24, 1868 and was buried on the property of the Motherhouse of the Sisters of the Good Shepherd in Angers. She was beatified in 1933 and was canonized in 1940 by Pope Pius XII.
Maria was born on September 8, 1863, in Munster, Germany. She was the daughter of Count Clement Droste zu Vischering and of Countess Helen von Galen. Her family on both sides was characterized by heroic loyalty to the Church. Asachild, Maria hadastrong will and was inclined to emotional explosions, but she also hadavery sensitive heart and deep feeling for others. She developed an exceptional generosity and singleness of purpose. On the day of her Confirmation, July 8, 1875, she became conscious ofacall to an apostolic religious life.
Between 1879 and 1881 she attended the boarding school of the Sisters of the Sacred Heart in Riedenburg in the Austrian Tyrol. This was for heraperiod of intensive intellectual and character formation. At this time, her desire to enter the religious life was prevented by her poor health condition. Instead she madeaprivate vow of virginity and livedalife of solitude in her parental home. However, in 1888, her health had so far improved that she began once more to think of enteringareligious order. Shortly after befriending an unhappy girl inanearby hospital, Maria felt called to the Good Shepherd. On November 21, 1888, Maria entered the Convent of the Good Shepherd in Munster. She was drawn enthusiastically to the apostolate of the Sisters of the Good Shepherd: the salvation of young persons in danger and difficulty. In this religious congregation she found, in addition to its thrust and zeal,adevotion to the Hearts of Jesus and Mary,aheritage from the founder, St. John Eudes. On January 10, 1889, she began her novitiate formation and received the name Sr. Maria of the Divine Heart. Early in her life asasister, she experiencedatension between contemplation and action, but after some months there cameaday when this interior suffering ceased.
Sr. Maria pronounced her perpetual vows on January 29, 1891, and immediately devoted herself to the community’s apostolate. On January 20, 1894, Sr. Maria received assignment for Lisbon, Portugal. On May 12, 1894, she was appointed superior of the Convent of the Good Shepherd in Oporto,aconvent which, according to her own words, was inaperilous condition. In spite of this, she courageously faced the arduous task of administration. She did not think of herself. And her example encouraged and brought new life to others. In May 1896, appeared the first signs of her illness,apainful spinal disease with progressive paralysis. In spite of excruciating pain, she continued as superior of the house. She also continued to be favored with extraordinary divine communications. Our Lord made known to her that He wanted the entire universe consecrated to His Heart and that she was to request this of the Holy Father. She carried out this delicate task in June 1898, and again, on the insistence of Our Lord in January 1899.
On June 8, 1899, eve of the Feast of the Sacred Heart, Sr. Maria died. On June 11, 1899, Pope Leo XIII consecrated the entire human race to the Heart of Jesus. She was beatified by Pope Paul VI on November 1, 1975.
St. John Eudes စိန်ဂျွန်ယုဒ် (စ်) (၁၆၀၁-၁၆၈၀)
စိန်မေရီယူဖရေးစီယား ပလတ်တီးယဲလ် (၁၉၇၆- ၁၈၆၈)
သူတော်မြတ် Maria Droste ZU Vischering (၁၈၆၃ – ၁၈၉၉)
ပွဲနေ့ – သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်
ဂျွန်ယုဒ် (စ်) သည် ပြင်သစ်သာသနာပြုတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Our Lady of Charity သီလရှင်အသင်း နှင်၊့ ယေဇူးနှင့်မယ်တော် ရဟန်းအသင်း (Eudist Fathers) ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး မယ်တော်၏ နှလုံးတော်နှင့် ယေဇူးရွှေနှလုံးတော်အား ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း ဝိနည်းကို ရေးသားခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
ဂျွန်ယုဒ် (စ်) သည် ၁၆၀၁ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၄ရက်နေ့မှာ ပြင်သစ်ပြည် နော်မန်ဒီအရပ်ရှိ Ri ဆိုသည့် ကျေးရွာငယ်လေး တွင် တောင်သူလယ်သမား မိသားစုတစ်ခုမှ မွေးဖွားခဲ့ပြီး အသက် ၁၄နှစ် အရွယ်တွင် Cean မြို့ရှိ Jesuit တက္တသိုလ်တွင် ပညာဆည်းပူးခဲ့သည်။ ၁၆၂၃ ခုနှစ်မှာ မိဘများ သဘောမတူသော်လည်း ပြင်သစ် ရှိ Oratory ရဟန်းအသင်းကို ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၆၂၅ ခုနှစ်၊ အသက် ၂၄ နှစ်တွင် ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီး မကြာမှီ ရုတ်တရက် နော်မန်ဒီ ဒေသ၌ ပလိပ်ရောဂါကပ်ဘေး ကျရောက်သဖြင့် လူပေါင်းမြောက်များစွာကို အသက်စွန့်ပြီး ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ တစ်ဝှမ်း အထူးသဖြင့် နော်မန်ဒီပြည်နယ်တွင် သာသနာပြုလုပ်ငန်း အနေဖြင့် တရားဒေသနာလှည့်လည် ဟောကြားရင်း ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။
၁၆၄၁ ခုနှစ်တွင် အကူအညီမဲ့နေသော အမျိုးသမီးများနှင့် ဘဝသစ် ပြန်လည်ထူထောင်လိုသော အမျိုးသမီးများကို ကူညီပေးရန် Our Lady of Charity သီလရှင်အသင်းကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၆၄၃ ခုနှစ်တွင် Oratory အသင်းမှ နှုတ်ထွက်ပြီး ယေဇူးနှင့် မယ်တော် ရဟန်းအသင်း (Eudist Fathers) ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုအသင်း၏အဓိက ဦးတည်ချက်မှာ ထိရောက်သော ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းများကို ဖွင့်လှစ်ကာ ရဟန်းများ၏ဘဝမြှင့်တင်ရေးနှင့် တရားဟောကျွမ်းကျင်သည့် သာသနာပြုများဖြစ်လာစေရန် ပျိုးထောင်ပေးခြင်းကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ဘုန်းတော်ကြီး ဂျွန်ယုဒ် (စ်) သည် ယေဇူးရွှေနှလုံးတော်နှင့် မယ်တော်၏ နှလုံးတော်ကို သဒ္ဒါကြည်ညိုခြင်း ရှိရန် အစဉ်ဟောပြောသွန်သင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ၁၆၈၀ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ တွင် Caen မြို့၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
၁၉၀၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ရဟန်းမင်းကြီး တစ်ဆယ့်သုံးကြိမ်မြောက် လီယိုမှ ဘုန်းတော်ကြီး ဂျွန်ယုဒ် (စ်) ၏ထူးခြားသော ပါရမီများကိုကြေငြာခဲ့ပါသည်။ သူ၏ ထူးခြားသည့် တန်းခိုးအံ့ဘွယ်များကို ၁၉၀၈ ခုနှစ် မေလ ၃ ရက်နေ့တွင် ရဟန်းမင်းကြီး ပဉ္စမကြိမ်မြောက် ပီဦး က အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ၁၉၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် သူတော်စင်တင်မြှောက်ပေးခဲ့ပြီး ၁၉၂၅ ခုနှစ် တွင် ရဟန္တာအဖြစ်တင်မြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။
ပွဲနေ့ – ဧပြီလ ၂၄ ရက်
ရို့စ်ဂျီနီပလက်တီယဲလ်သည် ၁၇၉၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် နော်မူတီယေ ဟုခေါ်သည့် ကျှွန်းကလေး၌ မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာဂျူလီယန်ပလတ်တီယား နှင့် အဲန် တို့၏ ရှစ်ယောက် မြောက်သမီးရတနာလေးဖြစ်ပါသည်။ မိဘများသည် ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးကြောင့် ဒုက္ခရောက်သူများ ကိုကူညီပေးခဲ့သဖြင့် နေရင်းဒေသဖြစ်သော စူလန်ဒေသမှ နော်မူတီယေကျွန်းသို့ နှင်ထုတ်ခြင်း ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကျွန်းကလေးတွင် ရဟန်းဘုန်းကြီးမရှိသဖြင့် ဖခင်ကိုယ်တိုင်ဆေးကြောခြင်းပေးခဲ့ပြီး (ရို့စ်ဗာဂျီနီ) ဟုအမည်ပေးခဲ့ပါသည်။ ရို့စ်သည် သွက်လက်ချက်ချာပြီး ဟာသဉာဏ်ရှိသော ကလေးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမမွေးဖွားရာ ဤကျွန်းကလေးပေါ်ရှိ သမုဒ္ဒရာ၊ သစ်တောနှင့် သဲသောင်ပြင် များပေါ်တွင် ဆော့ကစား ရသည်ကို အလွန် နှစ်သက်မြတ်နိုးသူဖြစ်ပါသည်။ ဝိညာဉ်တော်၏ ကျေးဇူးတော်နှင့် ပြည့်ဝပြီး နက်ရှိုင်းသော ယုံကြည်ခြင်းကို မိဘများထံမှ အမွေရရှိခဲ့သည်။ သူမသည်အခြား သာမန်ကလေးငယ်များကဲ့သို့ နောက်ပြောင် ကြည်စယ်တတ်သူဖြစ်သည်။ ပျောက်ဆုံးသွားသော ထိုကျွန်းကလေးကို မှိုင်းမတော်မူသော သူတော်မြတ် St.Philbert ၏ ဂူဗိမာန်အား စွန့်စွန့်စားစား ပြန်လည် ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
သူမသည် ငယ်စဉ်ကတည်းကပင် ရည်မှန်းချက်ကြီးမားပြီး အကြောက်အလန့်မရှိသော ရဲရင့်သည့် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမ၏ ငယ်သူငယ်ချင်းများသည် သူမ၏ ဦးဆောင်မှုအတိုင်း အမြဲလိုက်နာကြပါသည်။ သူမသည် ငယ်စဉ်တည်းက အထီးကျန်မှု၊ နာကြင်ခံစားမှုများ တွေ့ကြုံခဲ့ရပါသည်။ သူမအသက် ၉နှစ်အရွယ်တွင် အစ်မဖြစ်သူ Victoire-Emilie သေဆုံးပြီး ထိုနှစ် တနှစ်ထဲတွင် အသက်လေးဆယ့်လေးနှစ်ရှိ သူမ၏ ဖခင် မမျှော်လင့်ဘဲကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။ အစပိုင်းတွင် ကျွန်းပေါ်တွင် စာသင်ကျောင်း မရှိသေးသဖြင့် နေအိမ်၌သာ စာသင်ကြားခဲ့ရပြီး Ursuline Sisters များ ကျွန်းသို့ ကျောင်းလာဖွင့်ချိန်မှသာ အသက်တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ် အရွယ် တွင် ကျောင်းစတက်ခဲ့ရသည်။ ရို့စ်သည် ပညာသင်ရသည်ကို အလွန်နှစ်သက်သူဖြစ်သည်။ သူမ၏ ထက်မြက်မှုကြောင့် ဆရာသမားများနှင့် သူငယ်ချင်းများ၏ ချီးမွမ်းခြင်း ခံခဲ့ရပါသည်။ သူမ၏ ထက်မြတ်ပြီး မဟုတ်မခံတတ် သောစိတ်ကြောင့် ကျောင်းတွင် အကြီးအကဲများနှင့် မကြာခဏ အတိုက်အခံဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ သူမ၏ အပြုအမူကြောင့် တစ်နေ့ သူမသည် သိကြားမင်း သို့မဟုတ် နတ်ဆိုး ဖြစ်မည်ဟု သူမ၏ ဆရာမကမှတ်ချက်ချခဲ့သည်။ ထိုအခါ ကျွန်မသည် တစ်နေ့ သူတော်စင်ဖြစ်ရမည်ဟု ချက်ခြင်းပြန်လည်ချေပပြောဆိုခဲ့သည်။
သူမသည် အသက်တစ်ဆယ့်တစ်နှစ်တွင် ပထမကိုယ်တော်မြတ် ခံယူခဲ့သည်။ ထိုနေ့တွင်ပင် သူမ၏ ဘဝကို ဘုရားသခင်ထံ ဆက်ကပ်ရန် ပြင်းထန်သည့် ဆန္ဒများ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သည်။ ဧဝံဂေလိ ကျမ်းစာတော်မြတ်၌ နေ့စဉ်မည်သို့ ဝိညဉ်ခွန်အားယူ၍ အသက်ရှင်ရမည်ကို မိဘများထံမှ သင်ယူခဲ့သည်။ ကလေးဘဝကတည်းပင် မိခင်၏ ခြေရင်း၌ ကျမ်းစာကို အလွတ်ကျက်မှတ်ခဲ့ရသည်။ ၁၈၀၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ၂၁ရက်နေ့ Ursuline Sisters သုံးပါး ဘုရားကျောင်း၌ ပထမ သစ္စာပြုခဲ့ယူသောနေ့တွင် ဘုရားသခင်၏ ခေါ်သံကို ကြားခဲ့ရသည်။
သူမအတွက် လူသားတိုင်းသည် အဘဘုရားသခင်၏ ချစ်မြတ်နိုးသော ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မများ ဖြစ်ပြီး မိဘများကဲ့သို့ပင် ကရုဏာသနားခြင်းသည် သူမဘဝ၏ အဓိကသော့ချက် ဖြစ်သည်ဟု ခံယူခဲ့သည်။ သူမ၏ စာနာနားလည်ပေးတတ်သည့် လှပသောနှလုံးသားကြောင့် သူတစ်ပါးအပေါ် နောက်ပြောင် ကြည်စယ်ခဲ့မှုများအတွက် နောင်တရနေတတ်ပြီး ညစဉ် အိပ်ယာမဝင်မီ မိမိအပြစ်များအတွက် နောင်တယူကာ အသင်းတော်နှင့် ရဟန်းမင်းကြီးအတွက် ဆုတောင်းပေးခဲ့သည်။
အသက်၁၄နှစ် အရွယ်တွင် သူမမိခင်၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Mme. Chobelet ဖွင့်လှစ်ထားသော တူးရ်မြို့ ရှိ ဘော်ဒါကျောင်းတွင် ပညာဆက်လက်သင်ကြားရန် ပို့ဆောင်ခြင်းခံရသည်။ ကျွန်းကလေး တွင် လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာ မိသားစုနှင့် နေခဲ့ရသည့်ဘဝကို အလွန်လွမ်းဆွတ်ခဲ့ပြီး သူမအတွက် အလွန်ခက်ခဲပင်ပန်းသည့် ဘော်ဒါကျောင်းသူဘဝကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော်လည်း သူမဘဝကို စာနာနားလည်ပြီး အမြဲအားပေးနေတတ်သည့် ဆရာမ Pauline de Lignac ၏ နွေးထွေးသည့်မေတ္တာကို ရရှိခဲ့သည်။ ၁၈၁၃ ခုနှစ်တွင် သူမမိခင် Ann ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ကို မြေမြုပ်သဂြိုလ်ပြီးမှ သိခဲ့ရသောကြောင့် မိခင်ကြီးအတွက် အလွန်ပူဆွေးကြေကွဲ ဝမ်းနည်းခဲ့ရသည်။
၁၆၄၁ ခုနှစ်တွင် St .John Eudes တည်ထောင်ခဲ့ဲသည့် ခိုးကိုးရာမဲ့ အမျိုးသမီးများကို ကြည့်ရူစောင့်ရှောက်သော Our Lady of Charity of Refuge သီလရှင်အသင်း၏လုပ်ငန်းကို ကြားသိရသောအခါ ထိုအသင်းတွင်မိမိဘဝကိုဆက်ကပ်ရန် ခေါ်သံကိုလေးနက်စွာကြားခဲ့သည်။ ၁၈၁၄ ခုနှစ်တွင် သူမ အသက်နှစ်ဆယ့်တစ်နှစ် မွေးနေ့မတိုင်ခင် သီလရှင်အဖြစ်သစ္စာမဆိုရ ဟူသော သဘောတူညီချက်ဖြင့် သူမ၏အုပ်ထိန်းသူ Mr.Marsaud က ထိုအသင်းကို ဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ၁၈၁၇ ခုနှစ်မှာ သီလရှင်အမည် “Mary Euphrasia” အဖြစ် ပထမကတိ သစ္စာဆိုခဲ့သည်။ ထို့နောက် Sr. Mary Euphrasia သည် မိန်းကလေးများကို ကြည့်ရူစောင့်ရှောက်သည့် တာဝန်ခံ အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ၁၈၂၅ ခုနှစ်မေလ၂၅ ရက် ၊ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ်တွင် Tours မြို့ ရှိကျောင်းတွင် အကြီးအကဲအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး သူမ၏ ပထမဆုံးဦးတည်ချက်အတိုင်း မိမိကြည့်ရှုခဲ့ရသော အမျိုးသမီးများ၏ တောင်းဆိုချက်အရ ဝတ်ပြုဆုတောင်းခြင်း၊ ခြိုးခြံပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် သာသနာလုပ်ငန်းများကို အားကြိုးမာန်တက် လုပ်ဆောင်နေကြသော Sisters များကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးသည့် “ Magdalens” အမည်ရှိ သီလရှင်အသင်းအသစ်ကို (ယခု Contemplative Sisters of the Good Shepherd”) တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
၁၈၂၉ ခုနှစ်တွင် Angers မြို့ ရှိ ဆရာတော်၏ ဖိတ်ခေါ်မှုကို လက်ခံပြီး ဒုက္ခအခက်အခဲရှိသော မိန်းကလေးများအတွက် Our Lady of Charity ကျောင်းအသစ်ကို စတင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Tours မြို့ ၏အကြီးအကဲ သက်တမ်းပြည့်သွားပြီးနောက် ၁၈၃၁ ခုနှစ်တွင် Angers ကျောင်း၏ အကြီးအကဲ ဖြစ်လာပါသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် Mary Euphrasia သည် ပြင်သစ် နှင့် ဥရောပတစ်ခွင်တွင် ကျောင်းများတိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်ရန် တောင်းဆိုခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၈၃၅ ခုနှစ်တွင် ဗဟို ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအသစ်နှင့် Generalate တည်ထောင်ခွင့်ကို ရောမသို့ တင်သွင်းခဲ့ရာ ရဟန်းမင်းကြီး တစ်ဆယ့်ခြောက်ကြိမ်မြောက် ဂရေဂေါ်ရီ ထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ၁၈၃၅ ဇန်နဝါရီ ၁၆ရက်နေ့ တွင် Our Lady of Charity of the Good Shepherd အသင်းဟူ၍ စတင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ Mother Euphrasia ဟာ ကောင်းသောသိုးထိန်း အသင်း၏ အကြီးအမှူးဖြစ်လာပြီးနောက် ကျောင်းအသစ်များကို နေရာအနှံ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။ သူမ သက်တမ်းတလျှောက်၌ ကျောင်းပေါင်း ၁၁၀ ကို ကမ္ဘာ အနှံ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။
Mary Euphrasia သည် ၁၈၆၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၄ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး အွန်ဂျေမြို့ ရှိ ကောင်းသော သိုးထိန်း သီလရှင်ကျောင်းတွင် မြှပ်နှံသဂြိုလ်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင် သန့်ရှင်းသော သူတော်မြတ်အဖြစ် တင်မြောက်ခံရပြီး ၁၉၄၀ ခုနှစ်တွင် ရဟန်းမင်းကြီး တစ်ဆယ့်နှစ်ကြိမ်မြောက် ပီအူး က Sr. Mary Euphrasia ကို ရဟန္တာအဖြစ် တင်မြောက်ခဲ့ပါသည်။
ပွဲနေ့ – ဇွန်လ ၈ရက်နေ့
Maria ကို ၁၈၆၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၈ရက်နေ့တွင် ဂျာမနီနိုင်ငံ Munster မြို့ တွင် မွေး ဖွားခဲ့ပါသည်။ နယ်စားကြီး Count Clement Droste zu vischering နှင့် Countess Helen von Galen တို့၏ သမီးကညာ ဖြစ်ပါသည်။ မိဘနှစ်ပါး၏ နှစ်ဘက်မိဘများသည် အမိအသင်းတော်အပေါ်တွင် အလွန်သစ္စာစောင့်သိ ရိုသေကြသူများဖြစ်သည်။ Maria သည် ကလေးဘဝတည်းက စိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်သူဖြစ်ပြီး ဒေါသလည်းကြီးတတ်ပါသည်။ သို့သော် သူတစ်ပါးကို နားလည်ပေးတတ်ပြီး ကြင်နာသနားတတ်သည့် နှလုံးသားပိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမသည် အထူးရက်ရောစွာ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲတတ်ပြီး မိမိဘဝရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် တစ်ခုကိုသာ အာရုံစိုက်တတ်သူဖြစ်သည်။ ၁၈၇၅ ဇူလိုင်လ ၈ရက်နေ့ ခရစ္စမတ်အားပေးခြင်းခံသည့်နေ့တွင် တမန်တော်လုပ်ငန်းဖြင့် မိမိဘဝကို ဘုရားသခင်ထံ ဆက်ကပ်ရန်အတွက် ခေါ်တော်မူခြင်းရှိသည်ဟု ခံစားခဲ့ရသည်။
၁၈၇၉ ခုနှစ် နှင့် ၁၈၈၁ ခုနှစ်ကြားတွင် ရွှေနှလုံးတော် သီလရှင်အသင်း၏ ဘော်ဒါကျောင်း တွင်ပညာသင်ကြားခဲ့ပါသည်။ ဤကာလသည် သူမ၏အသိပညာ နှင့် အကျင့်စရိုက် ပုံသွင်းပေးခံခဲ့ရသည့် ကာလဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်၌ သူမ၏ သီလရှင်ဖြစ်ချင်သောဆန္ဒကို ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ချို့တဲ့သော အခြေအနေက အတားအဆီး ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် ဖြူစင်ခြင်းကတိသစ္စာကို မိမိဆန္ဒအလျှောက် ကျင့်ကြံပြီး တစ်ဦးတည်း ဆုတောင်းဝတ်ပြုလျှက် မိဘအိမ်မှာပင် ဘဝကိုဆက်ကပ် ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ၁၈၈၈ ခုနှစ်တွင် မိမိ၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသဖြင့် သီလရှင်အသင်း တစ်သင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် တဖန်ပြန်လည်စဉ်းစား ခဲ့ပါသည်။ မကြာခင်မှာပင် အနီးအနားရှိ ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသနေသော အခက်အခဲရိုသည့် မိန်းကလေးတစ်ဦးကို ကူညီရင်း ကောင်းသောသိုးထိန်းသီလရှင်အသင်းကို ဝင်ရောက်ရန် ဆန္ဒဖြစ်ခဲ့သဖြင့် ၁၈၈၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် Munster ရှိကောင်းသောသိုးထိန်းသီလရှင်အသင်း ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ သူမသည် ကောင်းသောသိုးထိန်းအသင်း၏ တမန်တော်လုပ်ငန်းဖြစ်သည့် အခက်အခဲဒုက္ခများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသောသူများကို ကူညီဖေးမခြင်း တမန်တော်လုပ်ငန်းလုပ်ရန် စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ပါသည်။ ဤအသင်း၌ စိတ်ဇောစေတနာထက်သန်ခြင်းအပြင် St. John Eudes ၏အမွေဖြစ်သော မယ်တော်နှင့် ယေဇူးရွှေနှလုံးတော်ကို သဒ္ဒါကြည်ညိုခြင်း ကိုရရှိခဲ့သည်။ ၁၈၈၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် သီလရှင်လောင်းဘဝကိုခံယူပြီး Sr.Maria of the Divine Heart အမည်ကိုရယူခဲ့သည်။ သီလရှင်ဘ၀ အစပိုင်းတွင် သူမသည် အတွင်းစိတ်၌ ဝတ်ပြုဆုတောင်းခြင်းအမှု နှင့် လူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်း တို့ နှစ်ခု၏ အားပြိုင်မှုကို ခံစားရသော်လည်း လအနည်းငယ်ကြာသောအခါ ထိုရုန်းကန်မှု တဖြည်းဖြည်း ရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။
Sr. Maria သည် ၁၈၉၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ တသက်သစ္စာကိုခံယူခဲ့ပြီး အသင်း၏ တမန်တော်လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် မိမိဘဝကို ဆက်ကပ်ခဲ့သည်။ ၁၈၉၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ လစ်ဘွန်း မြို့၌ တာဝန်ပေးချထားခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ထိုနှစ် မေလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် Oporto မြို့ရှိ ကောင်းသောသိုးထိန်းသီလရှင်ကျောင်း၏ အကြီးအကဲ အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။ သူမ၏ ပြောကြားချက်အရ ထိုကျောင်းသည်အန္တရာယ်များသော အခြေအနေတွင်ရှိနေသောအချိန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူမသည် ကိုယ်ကျိုးကိုမငဲ့ကွက်ဘဲ အန္တရာယ်များကို သတ္တိရှိရှိ ရင်ဆိုင်ပြီး တာဝန်ယူခဲ့သည်။ သူမ၏ ပုံစံနမူနာကောင်းဖြင့် သူတစ်ပါးကို ခွန်အားနှင့် အသက်သစ်ကို ပေးခဲ့သည်။ ၁၈၉၆ ခုနှစ် မေလတွင် ကျောရိုး၌ ပြင်းထန်သော နာကြင်ခြင်းဝေဒနာ နှင့်အတူ မြန်ဆန်စွာ တိုးတက်လာသည့် အကြောသေ ရောဂါ၏ ပထမဆုံး လက္ခဏာများ ပေါ်လာခဲ့သည်။ ပြင်းထန်သော ဝေဒနာကို ခံစားနေရသော်လည်း အကြီးအကဲတာဝန်ကို ဆက်လက်ယူခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဘုရားသခင်၏ ထူးခြားသော ဆက်သွယ်မှုများလည်း ကြုံတွေ့ခံစားနေခဲ့ရသည်။ ဘုရားသခင်က သူမကို ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးအား ယေဇူးရွှေနှလုံးတော်ထံ ဆက်ကပ်အပ်နှံရန် လိုလားကြောင်းနှင့် ထိုအတွက် ရဟန်းးမင်းကြီးထံတောင်းဆို ပေးရန်လည်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုကြီးမားသောတာဝန်ကို ၁၈၉၈ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဘုရားသခင်၏ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ၁၈၉၉ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် တဖန် ရဟန်းမင်းထံ တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့သည်။
၁၈၉၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ ရွှေနှလုံးတော်ပွဲနေ့ မတိုင်မှီတရက်တွင် Sr. Maria ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ် ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ရဟန်းမင်းကြီး တစ်ဆယ့်သုံး ကြိမ်မြောက် လီယို မှ ကမ္ဘာကြီးတခုလုံးကို ယေဇူးရွှေနှလုံးတော်အား ဆက်ကပ်အပ်နှံခဲ့ပါ သည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ရဟန်းမင်းကြီး ခြောက်ကြိမ်မြောက် ပေါလ် မှ Sr.Maria အား သူတော်မြတ် အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။
Phone : 09250789150
No.112, Bogyoke Aung San Street,
Opposite of Yangon General Hospital,
We can not do it alone without your Support!
© 2018-2022 Good Shepherd Sisters Myanmar (GSSM). All rights reserved. Web Design by NetScriper